isilawuli esizisebenzelayo industrial kwakhokelela - China Fastpcba Technology
Inkxaso Call pcba19@pcb-smt.net
isilawuli esizisebenzelayo industrial
ibhodi Safety and Protection Soft
pcb yonxibelelwano amandla
isilawuli esizisebenzelayo industrial kwabangela
FASTPCBA Technology Co., Ltd PCB umenzi eChina, Shenzhen. Kunye kweminyaka eli-14 uphuhliso, FASPCBA iba umenzi yokuqala iklasi ka-HDI PCB, kufuyo amandla 35,000 square metres. FASTPCBA libonelela umgangatho ophezulu wazala inkonzo PCB kunye PCB ibandla, kubandakanywa amacandelo zenkxaso, imisebenzi yovavanyo, conformal ukutyabeka kunye nebandla ngokupheleleyo abaxhasi kulo lonke ihlabathi. Isicwangciso sethu ishishini ndlongondlongo kusenza sikwazi ukunikezela ngeenkonzo eliphezulu nokhuphiswano ngenxa yethu ...
FASTPCBA Technology Co., Ltd PCB umenzi eChina, Shenzhen. Kunye kweminyaka eli-14 uphuhliso, FASPCBA iba umenzi yokuqala iklasi ka-HDI PCB, kufuyo amandla 35,000 square metres. FASTPCBA libonelela umgangatho ophezulu wazala inkonzo PCB kunye PCB ibandla, kubandakanywa amacandelo zenkxaso, imisebenzi yovavanyo, conformal ukutyabeka kunye nebandla ngokupheleleyo abaxhasi kulo lonke ihlabathi.
Isicwangciso sethu ishishini ndlongondlongo kusenza sikwazi ukunikezela ngeenkonzo eliphezulu nokhuphiswano ngenxa ezahlukeneyo, enokhuphiswano isiseko sabathengi bethu. Ngokusebenzisa esi sicwangciso, ukwazi ukwenza izigqibo ngokukhawuleza, bhetyebhetye ukuphendula ukutshintsha iimeko zeemarike kunye nokudala kakhulu ixabiso kunye neenzuzo kubathengi thina.
Ke Service, sibonelela 7days 24hours on-line yobungcali Pre-yentengiso, Ukuthengisa Nasemva-Sale inkonzo ukusombulula nawuphi na umbuzo malunga umyalelo. Naliphi na ixesha, nayiphi na imfuneko uya kufumana Reply ngokukhawuleza ukusuka kubasebenzi bethu abaqeqeshiweyo kakuhle kwaye friendly nenkxaso.
Market yethu ephambili eYurophu, entla USA, Australia, Umzantsi Melika, kunye Asia. siya kubeka umzamo omkhulu ngakumbi ukwakha uqhagamshelwano kunye nabathengi ngakumbi kwindawo ngakumbi. Konke esifuna ukukwenza, kukuba ukudibanisa ihlabathi kwiimveliso zethu, ukwabelana Ixabiso, Happyness kunye Achievement kunye nabathengi ngaphezulu.
PCB and SMT nebandla inkonzo enye
FR4, phezulu KT FR4, rhoqo, alamu, FPC
Min.thickness for layers yangaphakathi
(Cu ubukhulu ababandakanywa)
Single / kabini: 0,008 ± 0,004 "
weight engaphandle Cu
weight Cu Inner
PTH hole unyamezelo
NPTH hole unyamezelo
Oluhlaza, omhlophe, omnyama, obomvu, oluhlaza ...
Min solder buso clearanace
ezimhlophe, omnyama, omthubi, oluhlaza ...
100% test esebenzayo
X-reyi, AOI Test, uvavanyo esebenzayo
Max ubukhulu ibhodi wokugqiba
HAYI MOQ (1pcs)
HASL, ENIG, ukuntywiliselwa yesilivere, ukuntywiliselwa inkcenkce, osp ...
Square, isangqa, rhoqo (kunye jigs)
Iplastiki, intsimbi, isikrini
Q1: Yiyiphi inkonzo ntoni na?
FASTPCBA: Sibonelela isisombululo turnkey kuquka PCB awokuvelisa, SMT, inaliti iplastiki & metal, indibano yokugqibela, uvavanyo kunye nezinye inkonzo-value added.
FASTPCBA: Iinkonzo zethu PCB / PCBA ikakhulu ngenxa kumashishini kuquka Medical, Automotive, Communication.
Q4: Ngaba ahlole umgangatho ngexesha imveliso?
FASTPCBA: Ewe, siya ezivulekileyo neziselubala malunga ngenkqubo nganye imveliso into abayifihlayo na. Samkela umthengi ukuhlola inkqubo yethu imveliso kwaye ujonge endlwini.
FASTPCBA: Sizimisele ukuba asayine isiphumo NDA kumthetho ngapha yomthengi kwaye bethembisa ukuba ugcine idata baxhamli kwinqanaba eliphezulu ziyimfihlo.
FASTPCBA: Ngokuba locaphulo PCB, nceda unike iinkcukacha / iifayili Gerber kunye ebonisa iimfuno ezinxulumene zobugcisa kwakunye naziphi na iimfuno ezizodwa ukuba unayo.
Kuba locaphulo PCBA, nceda unike iinkcukacha / iifayili Gerber kwaye bom (Bill of materials), kwaye xa kufuneka ukuba benze umsebenzi uvavanyo, nceda kwakhona ukunika uvavanyo imfundiso / inkqubo.
FASTPCBA: Imiqathango Ukuhanjiswa EXW, Inombolo, FOB, DDU njalo ziyafumaneka zonke ngokusekelwe quote ngalinye.
FASTPCBA: Ngesiqhelo iiyure 24 iiyure 48 ngokukhawuleza ukufumana injineli lwangaphakathi ukuvavanya isiqinisekiso.
FASTPCBA: Hayi, awuna MOQ mfuneko, singakwazi ukuxhasa iiprojekthi zakho ukususela AMAGQABAZA ▸ ukuya yimveliso abaninzi.
Previous: Electrical kwabangela
Next: ekhaya onengqondo kwabangela
94v0 Ndaphila Bonisa Pcb
Aluminium Ndaphila Pcb
Aluminium Pcb Kuba Led
Pcb Flexible Kuba Led
Circuit Led Pcb Design
Pcb Led ukwenziwa
Tubi8 Led Tower Isilumkiso Light Pcb
isilawuli esizisebenzelayo Industrial ibhodi Soft
industrial esizisebenzelayo pcb
Zeziphi izinto ezinxulumene PCBA embi ...
Yintoni na imigaqo layout PCB in t ...
ke umjikelo locaphulo SMT ukuba t Koda kube nini ...